Le ndlu ibukekayo inomtsalane kwaye ikweyona ndawo ibalaseleyo eEagle Bay, kumgama nje oyi-50m ukusuka elunxwemeni oluhle.
Ijikelezwe yimithi emikhulu, inombono othandekayo wetyholo kunye nendawo enkulu, ejonge emantla, indawo yokonwabisa yangaphandle enendawo yokuphumla yemodyuli yangaphandle, ilungele iintsuku ezinde zonqena elangeni. Ebusika zibhaqe upholile ngaphakathi ujikeleze umlilo weenkuni ngelixa imvula ibetha kuphahla lwezinki.
Uya kufumana isicwangciso esivulekileyo sokuhlala kunye nekhitshi lendawo phambi kwendlu kunye neengcango zaseFransi ezikhokelela kwindawo engaphandle, enamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elibekwe ngasemva. Igumbi lokulala elikhulu lesithathu elinebhedi yobukhulu bokumkanikazi likumgangatho ophezulu, kwigumbi eliphezulu elivulekileyo eligcwele ukukhanya elinendawo yalo yabucala.
Ifakwe kakuhle, le ndlu inemvakalelo ephumle ngokumangalisayo-uya kuziva ngathi useholideyini ngokwenene. Ilungele iintsapho kunye nomhlobo onemilenze emine.
Ifumaneka kwiindonga ze-turquoise ezimangalisayo zeGeographe Bay, iDunsborough kuya kufuneka ibe neyona ndawo izolileyo kunye nenhle kakhulu emhlabeni.
Amanzi acwengileyo acwengileyo acwengileyo kunye neelwandle ezinesanti emhlophe yaseDunsborough zidityaniswe nedolophu yingca eluhlaza kunye neendlela ezinomthunzi. Kukho indawo ephithizelayo yecafe kunye neevenkile ezininzi ezintle zeboutique. Ebusuku kukho i-vibe enkulu enezindlu zotywala, iibhari zewayini kunye ne-pubs ezinomculo ophilayo, iivenkile zokutyela kunye neekhefi.
Iindlela zomjikelo ongaselwandle kunye neendlela zokuhamba zijika zibe yindlela yokuhamba ngeenyawo kwipaki yengingqi ecaleni kwebhayi. Kunye neelwandle ezifanelekileyo zokuqubha ikwayindawo entle yokuntywila, i-snorkelling, i-kayaking kunye neminye imidlalo yasemanzini. Zimbini iikhosi yegalufa!
Ngaphandle kweyona ndawo yomntla-ntshona sisiphelo esiphezulu seLeeuwin-Naturaliste National Park, yenye yezona ndawo zinomtsalane eDunsborough. Le ndawo ilikhaya kwilighthouse esebenzayo yaseDunsborough, iCape Naturaliste kunye nendawo ekuqalwa kuyo iCape ukuya eCape Track.
Yakhelwe kwisiseko sokusefa kunye neeholide zosapho, le dolophu ekuchithelwa kuyo iiholide ikhule yaba yindawo yeholide etyebileyo kubunewunewu kunye nolonwabo, ilungele usapho, izihlobo, izibini kunye nabapakishi.
Siya kufumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo ngexesha lomsebenzi nge-imeyile okanye umnxeba.
Ukuba kukho umba ongxamisekileyo iindwendwe ziyakhuthazwa ukuba zifowunele iofisi ukuze zikhuphe unxibelelwano olungxamisekileyo kumatshini wokuphendula.
Ukuba kukho umba ongxamisekileyo iindwendwe ziyakhuthazwa ukuba zifowunele iofis…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dunsborough